Aubameyang oo Lagula kacay Fal Cunsirinimo ah…( Maxaa lagu sameeyay ) – Gool FM
Aubameyang oo Lagula kacay Fal Cunsirinimo ah…( Maxaa lagu sameeyay )
CR Shariif December 2, 2018
( Premier League ) 02 DEC 2018. Taageere kooxda Tottenham ah ayaa la xiray kaddib markii uu qolofka muuska kusoo tuuray Pierre-Emerick Aubameyang intii lagu guda jiray kulankii guul-darrada la huwiyay kooxdiisa.
Weeraryahanka Gunners ayaa laba gool dhaliyay cayaartii kooxda Unai Emery ay guusha soo laabashada 4-2 kaga adkaatay naadiga ee coltamaan kulankii North London Derby.
Qolofka Muuska ayaa lagu soo tuuray laacibka heerka caalami ee dalka Gabon intii uu u dabaal dagayay goolka daah furka kulanka kasoo ahaa rigoore wuxuuna ku hor dabaal dagay afka hore ee taageerayaasha Spurs.
Kaamirada TV-ga ayaa soo qabatay sawirrada dhacdadan iyadoo ilaalada garoonka aysan malaha u jeedin falkaa xun.
Police ayaa tagay goobta ay fadhiyeen taageerayaasha iyadoona xiray taageerihii ku tuuray muuska gudaha garoonka.
Balse lama oga haddii ay ku xiran tahay dhacada cusuriminada ah.
DAAWO: Klopp oo sameeyay Dabaal Deg Waali ah oo lagu Tilmaamay XUSHMAD DARRO
Maurizio Sarri oo hal arin ka codsaday N'Golo Kanté, kadib kulankii Fulham